Ogaden News Agency (ONA) – Wararka Adisababa – Wafdigii Itobiya ee dhulboobka u sahantagay oo dhibaato kala kulmay Ogadenia
Wararka Adisababa – Wafdigii Itobiya ee dhulboobka u sahantagay oo dhibaato kala kulmay Ogadenia
Posted by ONA Admin	/ October 24, 2013
By Noora Afgaab :
Isbuucan dhexdiisa waxay dawlada guumaysigu aad ubuunbuuni safar ay madaxda tigrayga iyo malgashadayaal kutagidoonaan ogadeenya gaar ahaan gobolada Qorahay iyo Goday. wafdiga oo uu hogaaminayay ninka lasheegey in uu yahay RW kuxigeenka Itobiya ayaa waxaa lashaaciyay inay kadagidoonaan garoomada qabridahar iyo godey. Waftigan oo sahan u ahaa RW kuxigeenka guumaysiga, waxaa usii gogol xaadhayay u adeegaha cadawga Habaarwaalid qabe Cabdi Ubo, waxayna la socday Wakiilka gaarka ah ee alaamu diin iyo Azeb masfin xasikii kt Zanwi. Waxa safarka ku weheliyeyey, 5nin oo ka socoda wadanka Yuhuda. Ujeedadu waxay aheyd in lagu wareejiyo dhulbeereedaka Godey ama Shabeele.
Saacado kahor wakhtiga lafilayay in wufuudu soo dagto ayaa waxaa garoonka diyaarada ee Qabridahar weerar ku qaaday ciidanka xoraynta Ogadeenya waxaana khasaare wayn uu soo gaadhay garoonka iyo gaadiid ciidan iyo kuwa garoonka oo goobta ku sugnaa. Sidoo kale waxaa cabsi iyo argagax wayn ku dhaliyay maamulka ciidanka guumaysiga oo iyagu muddo bila ah diyaarinayay hawsha wafdiga waraaqo hanjabaad iyo digniin ah oo lagu daadiyay jidadka magaalada Goday iyo xataa gudaha garoonka diyaaradaha ee Goday. Fariimaha qoraaladaas ayaa uga digayay cidkasta oo iskudayda inay ka qayb qaadato boobka dhulka iyo khayraadka Ogadenia inay la kulmi doonto cawaaqib xumo. Waxaase ka waynayd fariinta ficilka oo isna gudbinayay fariin kale oo ah waan idinla joognaa waanuna idin jawaabi karraa.
Kadib weeraradaas af iyo gacanba leh waxaa nabadsugida guumaysigu go’aansadeen in waftiga uusan dhaafin garoonka Godey waxayna qiil ka dhigteen roobab iyo jidadka oo xun darted in waftigu uusan gaadhi Karin goobihii la rabay oo ay kamid ahaayeen dhulbereedka shabeele, gooba taariikhi ah iyo magaalada gudaheeda xataa.
Dhinaca kale waxay warbahinta qaarkeed shaaciynayeen in wufuudu la kulantay shilal kale oo dad kaga dhintay. Qayb ka mid ah warbaahintu waxay sheegayaan in Rw ku-xigeenka gaadhigiisa lala eegtay qarax waxyeelana soo gaadhay, qayb kaleetana waxay sheegeen in waftiga oo iskudayay in ay Jigjiga ku hakadaan jidka loo galay dadna lagaga laayay gadhigii RW kuxigeenka guumaysigana kharaase soo gaadhay isagana aan laga war qabin waxyeelada gaadhay. Dawlada guumaysiga oon looga baranin inay ka hadasho arimaha noocan oo kale ah ayaa afka furatay waxay ku andacoodeen in uu ahaa shil gaadhi oo 2 ruux ku dhinteen balse aysan weerar ahayn. Arinta sheekashada guumaysiga ayaa bixinaysa calaamad ah in khasaare kazoo gaadhay shilkaas oo loo aanaynayo in uu xidhiidh laleeyahay arimaha amni-darro ee dalka Ogadeniya kajira.
FG: Waxaan idiin soo dirayaa 2dan Sawir saad u fahamtaan farqiga u dhexeeya Jigjiga iyo Godey :
Midkan 1aad waa Cabdifataax oo Wafdiga u sharxayo Isbitaalka Jigjiga ee loogu magacdaray Meles Zinawi:
Midkan 2aadna waa Cabdi Iley oo Wafdiga ku qaabilay qol ku yaala Godey: